Oromo News 04.13.21 | KWIT
Oromo News 04.13.21
By Fatiya Adam • Apr 13, 2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti guyyaa har’a sababa Covid-19 akka namuu hin duin hime. Seati 24 keessati ammo namni haarawa qabame 146 dha, namni afur kan keessa kan Woodbury County keessati qabameedha.
Namni tokko kan senate Iowa waliin haassawe godhe turee akka corona virus qabame gabaasani jiru.
Kunis erga legislative session January keessa jalqabe as namni amma qabammaa nama sagalaffaa ta’uu isaa himan.
Iowa state house keessati haguugi fuula godhachuun kan dirqama hin qabneedha.
Miseensoni hojattoota mana catholic akka jedhanitti nama migrant ta’an Iowa keessati fudhachuu waan didanif governor Kim Reynolds akka aaran himani jiran.
Torbaan darbe keessa, governor akka jettetti Iowa ijiille baqqatoota jiraachisuf ammati akka hin dandeenne himan.
Television KCCI kan Des Moines keessa akka gabaasetti ogeessi hojattoota Catholic akka himatte State ijoole baqatoota kana fudhattee fi warraa waliin wal argisiise akka jiraattan gochuudhaf akka boota guddaa qabu hime.
Guyyaa kaleessa, memorial service Community keessati kan bakka fudhateefi dyra buaan local vitnamese community Hong Cud Nguyen ( Hong cook Win) yaadanno godhanii jiran.
Namni baayen Mary J. Treglia Community qabamuudhan Nguyen sababa Covid-19 May wagga tarte keessa kan duute yaadatani Jirani.
Nguyen warra baqqattoota qarqaarun jiraatota namni dhibbaan laakahaman kaan Sioux City Asian community keessati baaye qarqaara turte.
Yaadannoon kunis kan godhame guyaa dhaloota Nguyen’s 88 irrati.
Ramadan guyyaa borii kan jalqabu ta’a. jia kabajaa Muslima hundaati, kan isaan kabajanis soomudhan, ummata hunda waliin kan waliin dabarsaniidha.
Guyyaa har’a, gareen barattooota Muslima kan south Sioux City community school barsiisota waliin gahuudhan waaye ramadaan barsiisani jiran. Kunis barsiisoni jia kan keessa barattoota muslimaatif akka yeroo gahaa kenaniif himan.
Oromo News 04.09.21
By Fatiya Adam • Apr 9, 2021
Seera baasan Nebraska tax credits fi scholarships colle dabalatee birraa dabalataa kan uf keessa qabu dollara billion 9.7 bajata mootuma kan cinqe hir’isuudhaf dolaara million 115 kenne jira.
Package kunis July 1 irraa jalqaba bajata wagga lama kan itti aanu baasi State kan dandau ta’a.
(Seera baasun haarawa tokko tokko kan dhufe galii state dhahuu waan danda’uuf jigumsa ikoonimi irrati dubattaa turan, yeroo amma virus corona virus jiraatus haala eegamu oldha.)